PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-25 - UMTHELELA WOMSEBENZI WALOLU HLOBO
UMTHELELA WOMSEBENZI WALOLU HLOBO
INCAZELO yegama lesayensi elithi ‘ fracking’ lisho uhlobo lwemayini esetshenzwa ngokutshutsha ngomfutho (kuhle komuntu echatha umntwana ngochatho oluthengwa esitolo) uketshezi phakathi kwemifantu esemadwaleni angaphansi komhlaba ukuze kumuncwe i- gas nowoyela.
Kunodaba olufufusayo lubuye lulothe, lokumbiwa komcebo kawoyela ne- gas ngale ndlela nakuleli eduze nezintaba zokhahlamba kwelikamthaniya nasefree State.
Phambilini ngo-2011 emibikweni yabezindaba, ngesikhathi ukuhlwaya lomcebo ngale ndlela bekuhlongozwa esifundeni ikaroo, eyingxenye yesifundazwe i-eastern Cape nenorthern Cape, kwezwakala ukuthi nalapha kuyeza.
Kuzo zonke izimo ezifuze lezi, kuba nokuvungama nemibhikisho yokukhononda ekhaleni layo okuvamise ukuba ngabezokongiwa kwemvelo, abanikazi bomhlaba othintekayo nomphakathi ohlwempu.
Ezakamuva-ke zithi asephinde aqina amahlebezi okuthi izinkampani ezinkulu zakwamanye amazwe ezigxile embonini kawoyela ne- gas seziphinde zayivusa indaba yokuba zinikwe ilungelo lokuhlwaya lo mcebo ngale ndlela.
Lokhu kulandela ukuchithwa ngumnu Derek Hanekom ongungqonqoshe wezemvelo, kwemizamo yokuwumisa umsebenzi wokuhlwaya lo mcebo ngale ndlela.
Phakathi kwabebephikisana nokuqalwa kwalo msebenzi kubalwa lezi zinhlangano: yiworld Wide Fund for Nature, groundwork, Agrisa, Amahlubi Traditional Council nebakoena Traditional Council.
Isinqumo sikamnu Hanekom eseseka umnyango wezamandla usikhiphe ngomhla ka-9 kumandulo (September), nokuyikhona okunenkolelo yokuthi kuzonikeza umfutho le nkampani. Ukuthikamezeka kwempilo ebi- khona ngaphambi kokuba kuqalwe umsebenzi wemayini yinto eyenzeka cishe kuzo zonke izimayini noma ngabe ngazaluphi uhlobo lomcebo ombiwayo.
Nayo-ke i- fracking lena inowayo umthelela oshiya isimo sesiguqukile unomphelo. Futhi kuyaziwa ukuthi uma ukuhlaziya kososayensi okungashayi eceleni ngomthelela womsebenzi sekuveziwe, kuba nezigcawu okuye kuthiwe ngezokulalela izimvo zomphakathi.
Akuvamisile ukuba imibono evela kulezo zigcawu isihlehlise isinqumo sosozimboni abakhulu abasuke sebefana nehhashi elifakwe amahhanisi, bengasayingeni eyokuwuyeka lowo mcebo ungambiwangwa.